Friday Archives — यात्रा ली - आधिकारिक साइट
शुक्रवार शुक्रवार शुक्रवार शुक्रवार शुक्रवार शुक्रवार शुक्रवार शुक्रवार शुक्रवार शुक्रवार शुक्रवार शुक्रवार शुक्रवार शुक्रवार
के त राम्रो शुक्रवार बारे राम्रो?
यो कोही मृत्यु को दिन सम्झना गर्न सामान्य छ. एक प्रेम एक गुमाए जो कोहीले उनीहरूले मा पारित दिन कहिल्यै बिर्सन छौँ भनेर थाह. यो जीवन को अन्त छ, र यो हृदयविदारक छ.
पक्कै, मानव जाति रूपमा, हामी प्रियजनहरूलाई मात्र होइन सम्झना गर्छन्. जब महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक तथ्याङ्कले prematurely मर्न, हामी सम्झना र तिनीहरूलाई हामीलाई ल्याइएका दिन शोक. हाम्रो राष्ट्र दिन मार्टिन लुथर राजा जुनियर सम्झना. गोली थियो, र दिन यूहन्ना फा केनेडी मृत्यु भएको थियो. तर ती विशेष दिन रूपमा राम्रो उल्लेख कहिले. ती भयंकर दिन थिए, जहाँ प्रिय मानिसहरू खराब assassins द्वारा हत्या गरियो.
यद्यपि, दुई हजार वर्षअघि येशूले नासरतका आफ्नै खराब assassins द्वारा हत्या भएको थियो, र हामी "राम्रो रूपमा त्यो दिन सम्झना” शुक्रवार. सबैभन्दा बारेमा मानव इतिहास मानिसलाई जबरदस्ती कुटपिट थियो कुरा र हत्या गर्दा उहाँको शत्रुहरूले के दिन बारेमा यति राम्रो?
दुष्ट मानिसहरू परमेश्वरको पुत्र हत्या गर्न प्लट थियो भन्ने तथ्यलाई दुःखद छ र यो पक्कै पनि सबैभन्दा ठूलो पाप कहिल्यै प्रतिबद्ध छ. तर उहाँको मृत्यु यसलाई अघि वा पछि कुनै पनि अन्य मृत्यु विपरीत छ . हामी धेरै कारण त्यस दिन कल गर्न सक्छन् "राम्रो" शुक्रवार. उहाँले दुई.